Janoary 2020 - Pejy 2 - RayHaber | raillynews
[12 / 01 / 2020] Ny minisitry ny fitaterana Adil Karaismailoğlu dia any Marmaray	34 Istanbul
[12 / 01 / 2020] Minisitry ny Turhan: 'Tetikasa Rentan' i Channel Istanbul '	34 Istanbul
[12 / 01 / 2020] Eskişehir Te-hanana feo amin'ny rafitry ny gara miaraka amin'ny 'modely fiaraha-miasa'	26 Eskisehir
[12 / 01 / 2020] Fangatahana Sterilization an'ny Channel Istanbul	34 Istanbul
[12 / 01 / 2020] Boğaçay 38 Tugboat natomboka tamin'ny lanonana	34 Istanbul
Niresaka nandritra ny atrikasa Channel Istanbul, mpisolovava ary ny masoivoho Att. I Rıza Türmen sy ny Rame Admiral Türker Ertürk dia nilaza fa ny fantsona hatsangana dia hiteraka olana vaovao eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. 1 Istanbul Metropolitan Munisipaly Mpanolotsaina [More ...]
Ny ben'ny tanàna Bursa Alinur Aktaş, ny vahoaka manakaiky ny 100 Gürsu'nun tsy ho ela dia hitsambikina haingana ary ny drafitra ho an'i Gürsu dia nilaza fa manao izany izy ireo. Ben'ny tanànan'ny Metropolitan Alinur Aktaş dia nilaza hoe: [More ...]
Tamin'ny fotoan'ny tolakandro tamin'ny atrikasa Channel Istanbul, mpandrindra ny fandaharam-pianarana ao amin'ny oniversite Sabancı, mpikambana ao amin'ny Oniversite Boğaziçi University. Umit Sahin, ny tetikasa Channel Istanbul dia mifanohitra amin'ny fifanarahana Paris, hoy izy. [More ...]
Ny Repoblikan'i Torkia State lalamby (TCDD) nanorim-ponenana kandidà, ho amin'ny 07.02.2020/XNUMX/XNUMX ny daty miaraka amin'ny takiana tahirin-kevitra TCDD General Tale ny Human Resources Department of Fanendrena sy Fisarahan-toerana sampana na ny Regional Office (Haydarpasa-Ankara-Izmir-Sivas-Malatya sy Adana Afyon) Human [More ...]
Ireo antontan-taratasy takiana amin'ireo kandidà izay voatendry am-pahatsorana ho amin'ny toeran'ny TCDD Taşımacılık A.Ş. DOKUMENTSIA ilaina 2828) Tatitra birao momba ny fahasalamana (hopitaly Folo tanteraka) [More ...]
Ny asa ara-barotra ataontsika, izay manana tantara taloha miaraka amin'i Rosia, izay nahatongavan'ireo fifandraisanay tamin'ny fifamonoana noho ny fihetsik'ireo mpanao politika politika tato ho ato, dia niverina tamin'ny ambaratonga mahazatra izy ireo vokatry ny fifampiraharahana avo lenta sy fifampiraharahana. [More ...]
Tamin'ny taona 2016 dia nambara ho an'ny lamasinina haingam-pandeha ambony tany Bursa ary ny taona 2020 no lasibatra. Na dia nahemotra nandritra ny fotoana kelikely aza ny lamasinina tao an-tanàna noho ny tsinontsinona sasany tamin'ny fizotran'ny fananganana, ny tantaran'ny lalamben'i Bursa [More ...]
Androany tamin'ny Tantara 11 Janoary 1871 dia nankasitraka ny laharana Plovdiv-Burgas. 11 Janoary 1999 M2 Vehivavy tao amin'ny seranan'i Şişhane - Hacıosman Metro dia nidina tany amin'ny tonelina.
Androany amin'ny tantara: 13 Janoary 1931 Atatürk ao Malatya
Tram avy amin'ny Konya Metropolitan Fanambarana!
Androany amin'ny tantara: 12 Janoary 1920 ny lalamby Haydarpaşa-Baghdad